यसपटक बुटवलबासीले न्याय गर्नुहुन्छ : नगर सभापतिका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डे « Harekpal
यसपटक बुटवलबासीले न्याय गर्नुहुन्छ : नगर सभापतिका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डे
बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले खेलराज पाण्डेलाई मेयर पदमा उठाएको छ । कांग्रेसका नगर सभापति रहेका उनी सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका हुन् । यद्यपि, जसपा यो गठबन्धनमा छैन । पाण्डे यसअघिको निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदीसँग पराजित भएका थिए । एमालेले २२ वर्षदेखि जित्दै आएको बुटवलमा पाण्डेले आफ्नो चुनावी अभियान कसरी अगाडि बढाइरहेका छन् ? उनका योजना र प्राथमिकता के के छन् ? यी लगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर लक्ष्मण पौडेलले पाण्डेसँग गरेको कुराकानीः